Bit By Bit - Arar
Aniga ahaan, buuggan bilaabay sanadkii 2005, markii aan la shaqeeyo on my ay PhD. Waxaan la ordaya tijaabo online, oo aan kuu sheegi doonaa wax walba oo ku saabsan cutubka 4, laakiin hadda waxaan doonayaa inaan idiin sheego wax aan warqad kasta oo tacliimeed. Oo, waa wax aasaas bedelay sida aan ka fekero cilmi. Mid ka mid ah subax, markii aan la hubin ee web-server, waxaan ogaaday in habeen qiyaastii 100 qof ayaa ka soo Brazil ayaa ka qaybqaatay tijaabo my. waayo-aragnimo Tani saameyn qoto dheer ii on. Waqtigaas, waxaan lahaa saaxiibo oo la socda tijaabo shaybaarka dhaqanka, iyo waan ogaa siday ugu adag waxay lahaayeen in ay ka shaqeeyaan si ay u qortaan, maarayn, iyo dadka in ay ka qayb tijaabo ay bixiyaan; haddii ay u ordaan yaabaa 10 qof hal maalin, in uu ahaa horumar wanaagsan. Laakiin, iyada oo aan tijaabo online, 100 qof ka qayb halka ahayd in aan hurdada. Sameynta aad cilmi inta aad hurdada ka dhawaajin laga yaabaa in aad u wanaagsan in uu noqdo mid run ah, laakiin ma aha. Isbedelada ee technology-gaar ah kala guurka ah laga bilaabo da'da analog in da'da-celceliska digital in aan hadda qaadan karaa iyo falanqaynta xogta bulshada siyaabo cusub. Buugani wuxuu ku saabsan yahay samaynaya cilmi-bulsho ee ka mid ah habab cusub.
Waxaa buuggan loogu talagalay labada bulsho kala duwan. Waa saynisyahano bulshada in rabaan in ay sameeyaan sayniska xog dheeraad ah, oo ay tahay xogta saynisyahano in rabaan in ay sameeyaan sayniska ka badan bulshada. waqti ayaan ku bixiyaa in labada bulshooyinkaas, oo kitaabkan waa isku day la isugu keeno fikrado ay si fogaado ku quirks iyo erey-midkood. Marka la eego bulshooyinka in buuggan waxaa loogu talagalay, waa inay tagaan oo aan isagoo sheegay in kitaabkan ma aha oo kaliya ee ardayda iyo macalimiinta. Waxaan soo shaqeeyay qaar ka mid ah in dowladda (at Bureau US Census) iyo warshadaha casriga ah (at Microsoft Research), oo waxaan ogahay in ay jiraan badan oo cilmi xiiso baxsan dhacaya ee jaamacadaha. Sidaas daraaddeed, haddii ay kula tahay waxa aad samaynayso sidii cilmi bulsho, ka dibna Kutubkan waa idiin, wax dhib ah maleh meesha aad ka shaqeysid ama nooca farsamooyinka aad hadda isticmaasho.
Waxaan weli ku jira maalmaha hore ee cilmi bulshada ee da'da digital, oo waxaan arkay qaar is faham la'aan in ay yihiin sidaas aasaasiga ah oo si caadi ah in waxa macno ugu igu halkan si wax looga qabto, in hordhac ah. From xogta saynisyahano, Waxaan arkay laba is faham la'aan caadi ah. Midkii kowaad wuxuu u fikirayo in macluumaad dheeraad ah si toos ah furfuraya masalooyin. Laakiin, cilmi bulsho ma aan waayo-aragnimo. Dhab ahaantii, cilmi bulsho nooc cusub oo xogta, sida ka soo horjeeda in badan oo xog la mid ah, u muuqataa in ay sida ugu waxtarka badan. ismaandhaaf labaad aan soo arkay ka data saynisyahano fikirayo in cilmiga bulshada waa uun farabadan of fanaaniinta-hadal ku duudduubtay oo ku hareereysan dareen caadi ah. Dabcan, sida bulsho saynisyahan-dheeraad ah oo si gaar ah sida cilmiga-I aadan kula raacsaneyn in; Waxaan qabaa in cilmiga bulshada leedahay wax badan oo ka mid ah in ay bixiyaan. dadka Smart ayaa si adag uga shaqaynaysaa si ay u fahmaan dabeecadda aadanaha muddo dheer, iyo waxa ay u muuqataa caqli lahayn in ay iska indha xigmadda in Cagta ayaa ka dadaalkan. Waayo, rajadaydu waa in kitaabkan kuu soo bandhigi doonaa qaar ka mid ah xigmadda in hab arrintaasna waa u fududahay in la fahmo.
From saynisyahano bulshada, waxaan sidoo kale arkay laba is faham la'aan caadi ah. First, Waxaan arkay dadka qaar fikrad oo dhan cilmi bulsheed la isticmaalayo qalab of da'da digital ku salaysan a waraaqaha xun dhawr qori-off. Haddii aad kitaabkan akhrintiisa, aad leedahay malaha hore u akhriyin farabadan of waraaqaha isticmaala xogta warbaahinta bulshada siyaabo wax ku banal ama khalad ah (ama labadaba). Waxaan sidoo kale waxay leeyihiin. Si kastaba ha ahaatee, waxa uu noqon lahaa qalad halis ah in la soo gabagabeyn ka waa tusaale in dhammaan cilmi bulsho da'da digital waa xun. Dhab ahaantii, aad u badan tahay in ay sidoo kale ka akhriso farabadan of waraaqaha in la isticmaalo xogta sahanka siyaabo wax ku banal ama khalad ah, laakiin aanad wax ku qorin-off cilmi oo dhan oo isticmaalaya sahan. Taasi waa maxaa yeelay aad ogtahay in uu jiro cilmi weyn sameeyey xogta sahanka, iyo kitaabkan, waxaan doonayaa inaan idin tusin in ay jiraan sidoo kale waa cilmi weyn sameeyo qalabka da'da digital.
ismaandhaaf labaad caadi ah oo aan laga arki saynisyahano bulshada waa in la isku qaldo joogo la mustaqbalka. Markii qiimaynta cilmi bulshada ee da'da-ku cilmi digital aan doonayaa inaan sharaxaad ka ah waxa kitaabkan ku-waxaa muhiim ah inaad weydiiso labada su'aalood ee kala soocin,
Sidee si wanaagsan ayuu falaa style this of shaqada cilmi hadda?
Sida ugu wanaagsan ee style this of shaqada cilmi mustaqbalka sida isbedelka muuqaalka xogta iyo sida cilmi-sooci doontaa dareenka badan si uu dhibaatooyinkan?
Inkasta oo cilmi waxaa loo tababaray in ay ka jawaabaan su'aasha koowaad, waayo kitaabkan, waxaan qabaa su'aal labaad ka muhiimsan. Taasi waa, inkastoo cilmi bulshada ee da'da digital aan weli soo saaray weyn, qaabka-beddelo ku darsaday garaadka, heerka of horumarinta cilmi da'da digital waa cajiib degdeg ah. Waa heerka this isbeddelka, in ka badan heerka hadda, in ka dhigaa cilmi da'da digital si xiiso ii.
Inkastoo cutubka in la soo dhaafay u muuqday in aad bixiyaan maal kara waqti qaar ka mid ah cayimin mustaqbalka, hamigeyga kitaabkan ma aha in aad iibiso on nooc kasta oo gaar ah oo cilmi-baaris. Anigu shakhsi ahaan ma samayn saamiyada gaar ah ee Twitter, Facebook, Google, Microsoft, Apple ama shirkad kasta oo kale oo casriga ah (in kasta oo, aawadood oo ah bixinta buuxda, waxaan soo shaqeeyay ama maalgelin cilmi ka Microsoft, Google, Facebook iyo heshay). Haddii aad ku faraxsan tahay cilmi baarista in aad hore u qabanayaan waa: weyn, sii sameeyaan waxa aad samaynayso. Laakiin, haddii aad leedahay dareen ah in da'da digital ka dhigan tahay in wax cusub oo ka duwan waa u suurtoobaan, ka dibna waxaan jeclaan lahaa inaan idin tusin fursadaha kuwa. Sidaas darteed, buug oo dhan hamigeyga waa in ay sii sheekeeye lagu kalsoonaan karo, kuu sheegaysa ku saabsan oo dhan, alaabtii xiiso cusub oo suurto gal ah, halka iska idinku Hanuuniyey ka yar-dhacyada aan arkay dadka kale ku dhicin. Waxaan rajaynayaa in this caawin doonaa wanaajiyo cilmi-baarista iyo lagaaga caawiyo in aad si fiican u qiimeeyaan cilmi dadka kale.
Sida laga yaabo in aad hore u dareentay, midab ee kitaabkan lagu qoray waa qayb ka qaar ka mid ah buugaagta kale ee waxbarasho ee kala duwan. Taasi waa ula kac ah. Buugani wuxuu ka soo qalin seminar ah in aan wax baray at Princeton ee Department of Sociology, oo waxaan jeclaan lahaa buugga si qabsaday qaar ka mid ah tamarta iyo reyn ka seminar in. Gaar ahaan, waxaan rabnaa in kitaabkan in ay leeyihiin saddex sifooyinka: waxtar leh, rajo fiican, iyo mustaqbalka-oriented.
Caawinaya: My Hadafkayagu waa in ay qoraan buug in waxtar kuu ah. Sidaa darteed, waxaan doonayaa inaan ku qor qaab furan oo aan rasmi ahayn. Taasi waa sababta oo ah waxa ugu muhiimsan in aan rabo inaan soo gudbino si gaar ah ee fikirka ku saabsan cilmi-baarista bulshada. Oo, aan waayo-aragnimo ka waxbaridda soo jeedisay in sida ugu wanaagsan uu u gudbiyo hab this fikirka aan rasmi ahayn oo badan oo tusaalooyin waa.
Rajo fiican, saynisyahano Labada bulshooyinka in kitaabkan ku lug-bulsho iyo xogta saynisyahano-leeyihiin hababka aad u kala duwan. saynisyahano Data yihiin guud ahaan ku faraxsan; ay u muuqdaan in ay u arkaan muraayad sida nus buuxa. saynisyahano Bulshada, ayaa dhanka kale, guud ahaan waa ka badan oo muhiim ah, ay u muuqdaan in ay u arkaan muraayad sida badh madhan. In kitaabkan, Waxaan ku socdaa in ay qaataan lahjadda rajo ah saynisyahan xogta ah, inkasta oo aan tababarka waa sida cilmiga bulsho. Sidaas, markii aan soo bandhigo tusaalooyin, waxaan doonayaa inaan kuu sheego waxa aan jeclahay oo ku saabsan tusaale. Oo, markii aan samayn tilmaan dhibaato tusaalooyinka iyo waxaan samayn doonaa, maxaa yeelay, cilmi ma kaamil ah-håndbold socday in ay isku dayaan in ay tilmaan dhibaatooyinkan hab waa wanaagsan iyo rajo fiican yahay. Ma doonayo inaan in ay muhiim aawadood isagoo muhiimka ah. Waxaan doonayaa inaan noqon muhiim ah si aan u caawin karaan in aad la abuuro cilmi dheeraad ah oo qurux badan.
Mustaqbalka-u janjeedha: Waxaan rajeynayaa in buuggan uu kaa caawin doontaa in aad samayn cilmi bulsheed la isticmaalayo nidaamka digitalka jira maanta iyo nidaamyada digital in la abuuri doono mustaqbalka. Waxaan bilaabay noocan oo kale ah cilmi-baarista samaynaya 2003, iyo tan iyo markaas waxaan soo arkay badan oo isbedel ah. Waxaan xusuustaa in markii aan ahaa in dadka dugsiga ka qalin ahaayeen kuwo aad u faraxsan oo ku saabsan isticmaalaya MySpace cilmi bulsho. Oo, markii aan baray fasalka iigu horeysay waxa ka dibna waxaan u bixiyey "cilmi bulshada web-ku salaysan," dadka ahaayeen kuwo aad u faraxsan oo ku saabsan Caalamka dalwaddii sida SecondLife. Hubi in mustaqbalka inta badan waxa ay dadku ka hadlayaan maanta u muuqdaan kuwo doono doqon iyo dhacsan Waxaan ahay. Trick The in ay sii joogi khuseeya ee wejiga isbedelka this degdeg ah waa liishaamo. Sidaa darteed, tani ma aha waxa ay noqon doontaa buug in aad bartaa si sax ah sida loo isticmaalo API Twitter ah, halkii, waxaa ay noqon doontaa buug in bara sidii aad u baran ka raad digital (Cutubka 2). Tani ma aha waxa ay noqon doontaa buug in uu kuu tallaabo-tallaabo tilmaamaha socda tijaabo on Amazon Farsamada Turk; halkii, waxa ay baraan sida aad u qorshayso oo tarjumaan tijaabo ku tiirsan kaabayaasha da'da digital (Cutubka 4). Iyada oo la adeegsanayo liishaamo, Waxaan rajeynayaa in tani waxay noqon doontaa buug Xisbiyada Mucaaradku on topic habboon.
Waxaan qabaa in ay tahay markii ugu farxada badan abid in cilmi-bulsho ahaan, iyo Waxaan doonayaa inaan si ay isugu dayaan inay soo gaadhsiiso faraxsan in hab in uu yahay sax ah. Taasi waa, waa wakhti ay ka gudbaan guud ee caddayn ah oo ku saabsan awoodaha sixir xogta cusub. Waxaa la joogaa waqtigii si aad u hesho gaar ah.